Wadada Xirfadaha | BGA
Dariiqa Sayniska Deegaanka iyo Wadada Tacliinta Farsamada
US. Bixinta Warbixinta Dugsiga Ribbon Green Green Report
Boston Green Academy waa dugsiga keliya ee sare ee ku yaal Dugsiyada Dadweynaha Boston ee bixiya barnaamij xirfadeed ee wadada cilmiga Deegaanka & Teknolojiyada. Ardayda dhammeeya dariiqaan waxay diyaar u yihiin inay sii wataan waxbarashadooda kulleej ama galaan shaqada xoogag kala duwan oo deegaanka ah sida khubarada tayada biyaha, saynisyahano deegaanka iyo injineerro, saraakiisha bulshada iyo gobolka, iyo ururada kale ee deegaanka si ay u baaraan arrimaha dhabta ah ee deegaanka deegaanka. . Ardayda ka qalin jabisa barnaamijka Wadada Sayniska Deegaanka waxaa lagu aqoonsan yahay Gargaarka Degdega ah iyo CPR, 10-saac OSHA shahaadada badbaadada guud ee warshadaha, iyo Howlgallada Qashinka Halista ah ee 40-ka saacadood ah OSHA. Ardayda ayaa waliba lagu tababaray biyaha qashinka iyo tikniyoolajiyadda biyaha la cabbo, waxayna diyaar u yihiin inay qaataan Hawl wadeennada Daaweynta Qashinka ee Dawladda Hoose ee Massachusetts iyo Fasalka I ee Cabitaanka Biyaha ee ay maamusho Gobolka Massachusetts. Barnaamijku wuxuu ku kasbanayaa aqoon-isweydaarsi 6 asbuuc ah oo lala yeelanayo urur deegaan ama shirkad ay doortaan.
Hoos ka daawo fiidiyowga gaaban ee xafladeena Green Ribbon Award, oo laga duubey Shabakada Xaafadaha Boston.
Halkan waxaa ah fiidiyowga ardaydeenna ku qaadanaya sawirrada kuleylka ah ee 'Old Old House House' Boston ee diyaargarowga
ee taariikh ahaan, dayactirka cagaaran.
Si aad waxbadan uga sii ogaato, fadlan la xiriir midkood Chamberlain Segrest , Agaasimaha BGA ee Barnaamijyada Cagaaran, ama Chris Donnelly , macalinka barnaamijka CTE.
Barnaamijkan wuxuu u diyaariyaa ardayda kuliyada iyo / ama shaqooyinka waana u furan yahay arday kasta oo ka diiwaangashan BGA. Sanad kasta, ardayda soo codsata fasalka 9aad waxay dalban karaan koox cusub 4 sano ah. Haddii dhibco ay furmaan sannadihii dambe waxaa jira hanaan lagu soo biirinayo kooxda isku dhafka ah wakhtigaas. Liiska koorsada iyo arjiga waxaa laga heli karaa xiriiriyeyaasha soo socda:
Halkan ka fiiri liiska koorsooyinka .
Ka hel arjiga halkan CTE .
Codsi Isbaanish ah
Codsashada af Faransiis